Igbo, John: Lesson 060 - Ekwensu, onye na-egbu ọchụ na onye ụgha (Jọn 8:37-47) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 060 (The devil, murderer and liar)
44 Gi onwe-gi sitere na nna-gi, ekwensu; i nāchọ kwa ime nna-gi. Ọ bụ onye na-egbu ọchụ site ná mmalite, ọ dịghịkwa eguzo n'eziokwu ahụ, n'ihi na eziokwu adịghị n'ime ya. Mb͕e ọ nēkwu okwu-ugha, ọ nēkwu okwu n'onwe-ya; n'ihi na ọ bu onye-ugha, na nna-ya.
Jizọs gwara onye ọ bụla na-ahụghị ya n'anya na ekwensu bụ nna ha. Site na nke a, o gosipụtara ndị Juu eziokwu banyere onwe ha n'agbanyeghị na ha kwuru na ha maara Chineke. Ndị na-ede iwu ahaghị Chineke. Onye Ọjọọ bụ nne na nna ha.
Ekwensu na-akpata ọgba aghara n'ebe ọ bụla ọ na-aga. Nzube ya bụ ime ka ọdịda nke ihe Chineke kere daa. Ọ na-achọpụta ihe ndị na-adịghị ike n'ime onye ọ bụla ma nwaa ya ọnwụnwa site n'ịghọ aghụghọ na-eduga ya ime mmehie. Karịa ka ọ na-agba ọsọ n'ocheeze Chineke na-ebo onye dara ada ebubo ka ọ kwadoro ntaramahụhụ nke onyeikpe na onye ọjọọ; N'ihi ya, ihe jọgburu onwe ya bụ aghụghọ!
Jizọs kwupụtara na Setan na nchikota ngụkọta nke ajọ n'oriri nke na-efunahụ ya nke ezi nma. Ọ ghọrọ ohu nke onwe ya, kpọọ onye ọ bụla asị. N'otu ndu ahu ka ndi iro nile nke Kraist di ndu, nabibi ndi ozo na onwe ha ka ha churu ha site na ochicho ha. Ndị niile na-anọghị n'ebe Onyenwe anyị nọ na-eche echiche ọjọọ nke Setan na-etinye n'ime ha.
Gini bu ọchịchọ Setan? Jisos na-agwa anyị na ọ bụ a na-egbu ọchụ site ná mmalite; nke ahụ bụ n'ihi na ọ na-eleda onyinyo Chineke anya n'ime mmadụ. O kewara onwe ya n'aka Chineke onye na-enye ndụ. N'ime ya ọnwụ ebighi ebi mere. Ọ bụ ọchịchị nke ọnwụ. Nzube ya bụ ikpochapụ ihe niile dị ndụ.
Ihe kpatara nke a bụ aghụghọ. Ekwensu weghaara uzo mbu site n'inyere Adam na Iv aka n'enwegh ekwegh ekwe na imebi iwu Chineke. O ghagidere onwe ya mgbe o na-eduzi onye mmuo ozi, na-eche na onwe ya bu onye kariri karia ma mara nma karie Chineke.
Nghahie onwe onye a bụ ihe kachasị mkpa nke Setan bụ onye na-aghọtaghị oke nke ọchịchọ ya wee daa. Kraist abughi nke a n'ihi na obu onye di umeala n'obi na onye di ala. N'ụzọ dị mwute, mmadụ na-ahọrọ ịghọ aghụghọ na nya isi kama ịdị umeala n'obi Kraịst na nkwenye onwe onye. Ya mere, onye nduhie ahu weghachite ndi agha ndi n'egha site n'onu ha puta dika ugha nke ndu ndu. Enweghị obi ike ọ bụla gosipụtara na nke ọzọ.
Otu nwanyị gwara mama ya, sị, "Ndị niile bụ ndị ụgha, ha na-eji obi ụtọ na-agwa ibe ha ọnụ ọchị." Onye ọ bụla na-asọpụrụ onwe ya, ụmụ akwụkwọ na-aghọ aghụghọ n'ule, ndị ahịa na-aghọgbu onwe ha. ya onwe ya ga-abụ nanị onye ziri ezi."
Ihe ndị Setan kpaliri bụ ụgha! Ọtụtụ mgbe, ụgha ndị a nwere ụfọdụ eziokwu n'eziokwu ebe ọ bụ na Setan na-eme ka ụgha ọ bụla daa adaba. Ọ bụ onye nduhie na nna ụgha.
45 Ma n'ihi na Mu onwem nēkwu ezi-okwu, unu ekweghi na Mu. 46 Ònye n'ime unu nēme ka m'mara nmehie? Ọ bụrụ na m gwa eziokwu ahụ, gịnị mere i kwenyeghị na m? 47 Onye sitere na Chineke nānu okwu Chineke. N'ihi nke a unu adịghị anụ, n'ihi na unu esiteghị na Chineke."
Naanị Jizọs na-agwa eziokwu ma na-ekpughe eziokwu nke Chineke. Ngọzi nādiri ndi kwere okwu-Ya. Ọ maara eziokwu nke eluigwe na ụwa ma dị umeala n'obi na ikwesị ntụkwasị obi n'ihe niile ọ na-ekwu.
Ọtụtụ ndị anabataghị ozi ọma nke eziokwu a n'ihi na ọ bụ Jizọs na-ekwu ya. Ọ bụrụ na onye isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ onye nchịkwa okpukpe ga-ekwu ihe Jizọs kwuru, ndị mmadụ ga-ekwere ya. Ma, mgbe Jizọs kwuru na ọ bụ mmadụ nkịtị, ndị mmadụ jụrụ ya n'ihu ọha n'ihi na ha chọrọ ịdị ukwuu na ịbụisi kama ịjụ onwe ha.
Jizọs jụrụ ndị Juu n'ụzọ doro anya, "Gini mere gi ekwegh ekwe? Ùnu ahuwo ugha n'arum ma obu nganga ma obu omume ojo? Ee, ana m ekwu okwu n'eziokwu ma na ebi ndu ya. Aghụghọ."
N'ikpeazụ, Jizọs gwara ndị ya na-enupụ isi, sị, "Onye si na Chineke na-anụ okwu Ya ma nụ olu Ya Dịka nwatakịrị na-aghọta olu nne na nna ya na ụda olu ọ bụla ọzọ, nne mgbe ọ na-anụ ka nwa ya nọ na-ebe ákwá, gbagara ya Ya mere, onye a na-akpọ Chineke na-anụ olu Nna nke eluigwe, ma ndị na-enweghị ike ịghọta Oziọma ahụ abụghị nke Chineke. " Nwoke nwere ike ịbụ onye okpukpe, na-ekpe ekpere ma na-ebu ọnụ, ma nna ya nwere ike bụrụ ekwensu. Okpukpere Chineke anyi adighi azoputa anyi, mana nani nmutaghachi nke obara Kraist, ka mmuo wee biakwasi anyi ma biri n'ime anyi. Ònye bu nna gi, Chineke ma obu Setan? Ekwula ngwa ngwa iza, ma jiri ugwo gi tụnyere ndi nke ojo ahu, mgbe ahu gi na oru nke Kraist ma chegharia.
EKPERE: Nna nke eluigwe, anyị na-ekele gị maka ịkụziri anyị eziokwu banyere mmehie anyị na ịhụnanya gị. Gbaghara m ụgha, ma mee ka m ghara ịkpọasị na nganga. Zere m n'aka ike Setan ka m wee jụ onwe m ma ghara ịnọgide na nduhie onwe onye. Meghee ntim na obi gi nye Ozi oma gi, ma mee ka m di umeala n'obi na onye kwesiri ntukwasi obi.
Gịnị bụ àgwà ekwensu nke Jizọs mere ka anyị ghọta?